एडोब क्रिएटिभ क्लाउडमा कानूनी रूपमा नि:शुल्क कसरी सामेल हुने?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Creative Cloud फ्री
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-01-03, Nepali Blog
CREATIVE CLOUD सित्तैमा
Adobe Creative Cloud बाट सबै सफ्टवेयरहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? सदस्यताको लागि भुक्तान नगरी Adobe एपहरू प्रयोग गरेर यी पूर्ण रूपमा कानूनी र प्राविधिक रूपमा समर्थित तरिकाहरू हेर्नुहोस्। कसरी पैसा बचत गर्ने र सबै Adobe उत्पादनहरूमा राम्रो छुट प्राप्त गर्ने बारे थप पढ्नुहोस्।
दुर्भाग्यवश, एडोब क्रिएटिभ क्लाउडलाई सँधै निःशुल्क प्रयोग गर्न असम्भव छ, यो अवधि सीमित छ। तपाइँसँग पहिलो Adobe CC नि: शुल्क परीक्षण सुरु भएको सात दिन छ। यद्यपि, यो समय तपाईलाई सबै Adobe सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ कि भनेर निर्णय गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ।
नि: शुल्क Adobe Creative Cloud लाभहरू
ठूलो क्लाउड भण्डारण
सिक्नको लागि व्यापक आधार
मैत्री प्राविधिक समर्थन
सबै Adobe एपहरूसँग एकीकरण बन्द गर्नुहोस्
सफ्टवेयरको फराकिलो दायरा
तपाईंको व्यक्तिगत पोर्टफोलियो वेबसाइट
Adobe Creative Cloud नि: शुल्क परीक्षण FAQ:
नि:शुल्क परीक्षण Adobe CC को अन्त्यमा मैले के गर्नुपर्छ?
आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्, तपाईंको प्रयोगकर्ता खातामा थप डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंको सदस्यता नवीकरण गर्नुहोस्।
ADOBE CC नि:शुल्क परीक्षण सर्तहरू हेर्नुहोस्
के म मेरो योजना परिवर्तन गर्न सक्छु?
हो, कुनै पनि समयमा, तपाईंले पहिले नै चयन गर्नुभएको छ र एक विशेष सदस्यता प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने पनि। प्राविधिक सहयोगलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, कारण निर्दिष्ट गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया र थप निर्देशनहरूको लागि पर्खनुहोस्।
ADOBE योजनाहरू हेर्नुहोस्
केही उपलब्ध सफ्टवेयरहरू चलेनन् भने के हुन्छ?
न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू र आफ्नो कम्प्युटर विशिष्टताहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, भाइरसहरूको लागि आफ्नो पीसी जाँच गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र फेला परेमा तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस्। अर्को, सबै सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा पुन: स्थापना गर्नुहोस्। समस्या समाधान भएको छैन? प्राविधिक सहयोगलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के मैले Adobe Creative Cloud सबै एपहरूमा छुट पाउन सक्छु?
हो, यदि तपाईं आधिकारिक संस्थाको विद्यार्थी वा शिक्षक हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग चयन गरिएको योजनाको कुल योगफलबाट ६०% छुटको रूपमा केही विशेषाधिकारहरू छन्।
ADOBE छुट पाउनुहोस्
क्रिएटिभ क्लाउडमा के समावेश छ?
Photoshop, इलस्ट्रेटर र Adobe XD + चरण-दर-चरण ट्यूटोरियलहरू, 100GB क्लाउड भण्डारण, तपाईंको व्यक्तिगत पोर्टफोलियो वेबसाइट, प्रिमियम फन्टहरू सहित २०+ रचनात्मक एपहरू।
तपाईंले Hacked Adobe CC किन प्रयोग गर्नु हुँदैन?
तपाईले प्रत्येक प्रोग्रामलाई अलग-अलग डाउनलोड गर्नुहुन्छ कि फरक पर्दैन, यसरी पूर्ण क्रिएटिभ क्लाउड प्याकेज वा केही स्ट्यान्डअलोन संस्करणहरू सङ्कलन गर्नुहोस् - यो सबै टोरेन्ट स्रोतहरू मार्फत भइरहेको छ। यसको मतलब तपाईं र तपाईंको पीसी खतरामा हुनुहुनेछ। मैले एडोब क्रिएटिभ क्लाउड क्र्याक प्रयोग गर्दा हुन सक्ने शीर्ष4समस्याहरूको गणना गरेको छु:
रचनात्मक क्लाउडले थप सुविधाहरू समर्थन गर्दैन
वास्तवमा, क्रिएटिभ क्लाउड एक स्ट्यान्डअलोन प्लेटफर्म होइन, यो पूर्ण रूपमा Adobe सर्भरहरूमा निर्भर गर्दछ। यसको मतलब डाउनलोड गरिएको टोरेन्ट संस्करणहरू कार्यक्षमतामा सीमित हुनेछन्। तपाईं क्लाउड भण्डारण पहुँच गर्न र एपहरूसँग नजिकबाट काम गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। त्यसैले, यो प्रयोग गर्न राम्रो छ लाइटरूम परीक्षण संस्करण वा निश्चित समय भित्र अन्य सफ्टवेयर परीक्षण।
ADOBE CC संस्करण नि:शुल्क अपडेट गर्नुहोस्
क्रिएटिभ क्लाउड नि: शुल्क ह्याक प्रयोग गरेर, सम्भवतः, तपाइँले एकदम लोकप्रिय समस्या सामना गर्नुहुनेछ - कुनै पनि सफ्टवेयरमा ढिलाइ र विभिन्न प्रकारका बगहरू। यो सबै यस तथ्यको कारण हो कि तपाइँका सम्पादकहरूको संस्करणहरू इजाजतपत्र प्राप्त छैनन्, तिनीहरू पहिले नै ह्याकरहरू द्वारा प्रशोधन गरिएका छन्। स्रोत कोडका रेखाहरू भाँचिएका छन्, त्यसकारण, तपाइँ कार्यक्रमहरूको गलत अपरेशन प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्ता समस्याहरू रोक्नको लागि, तपाईंले गर्नुपर्छ Adobe Illustrator किन र सुइटका अन्य कार्यक्रमहरू।
नयाँ उपकरण र विशेष प्रस्तावहरू बारे बिर्सनुहोस्
प्रत्येक पतनमा, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको आईफोन अपडेट गर्न र नयाँ सुविधाहरू परीक्षण गर्न नयाँ आईओएसको रिलीजको लागि पर्खिरहनु भएको छ। यद्यपि, यदि तपाईंको आईफोन मौलिक थिएन भने, तपाईंले अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन, किनभने यसको सिरियल नम्बर डाटाबेसमा फेला परेन। रचनात्मक क्लाउडले समान सिद्धान्तमा काम गर्दछ। अवैध रूपमा डाउनलोड गरिएका संस्करणहरूमा गलत सिरियल नम्बर छ, जसको अर्थ एउटै कुरा हो - थप समर्थन छैन।
ADOBE CC विशेष प्रस्तावहरू
ग्राहक समर्थन को अभाव
एक सम्मानित कम्पनीको रूपमा, Adobe सुनिश्चित गर्दछ कि ग्राहकहरूलाई यसको उत्पादनहरू प्रयोग गर्न कुनै समस्या छैन। जब तपाइँ Adobe मा खरिद गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग दिनको कुनै पनि समयमा ग्राहक समर्थनमा पुग्ने अवसर हुन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई सफ्टवेयरको प्रयोग सम्बन्धी सबै कठिनाइहरूको सामना गर्न वा विभिन्न उपकरणहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। एकचोटि तपाईंले स्थापना गर्नुभयो एडोब पोर्टफोलियो टोरेन्टबाट नि:शुल्क वा अर्को कार्यक्रम, तपाईलाई समस्या भएमा कसैले पनि मद्दत गर्न सक्नेछैन।
नि: शुल्क एडोब क्रिएटिव क्लाउड विकल्पहरू
क्रिएटिभ क्लाउड एक विश्वव्यापी प्लेटफर्म हो र यसको कुनै विकल्प छैन। यद्यपि, यसका बावजुद, ACDsee र Affinity Photo कम्पनीहरूले हामीलाई प्रत्येक वर्ष उल्टो कुराको लागि विश्वस्त गराउँछन्। यी धेरै अनुप्रयोगहरूसँग एकदम तंग प्लेटफर्महरू छैनन्, तर विकासकर्ताहरूले छवि सम्पादकहरूको धेरै संस्करणहरू प्रस्ताव गर्छन् जुन लगभग सबै कार्यहरू गर्न सक्षम छन् जुन Adobe Creative Cloud ले गर्न सक्छ।
1. रचनात्मक क्लाउड वैकल्पिक: ACDsee
ACDSEE नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
प्रभावहरु संग काम को लागी उपयोगी उपकरण
डाटा माध्यमबाट फाइलहरू प्रशोधन गर्ने सम्भावना
जटिल सिकाइ वक्र
क्लाउड भण्डारणको सानो मात्रा
ACDSee कम्पनीले छविहरू, भिडियो सम्पादन र RAW फाइलहरू हेर्न र व्यवस्थापन गर्न क्रस-प्लेटफर्म सम्पादकहरू विकास गर्दछ। ACDSee का सम्पादकहरूले उन्नत गहिरो सुधार प्लग-इनहरू र पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य इन्टरफेसहरूको रूपमा धेरै संगठनात्मक कार्यहरू र उपयोगी उपकरणहरू प्रस्ताव गर्छन्।
उपयोगी सुविधाहरू बीच, म भिडियो सम्पादक नोट गर्न चाहन्छु। उन्नत उपकरणहरूको अतिरिक्त, तपाइँ यसलाई तपाइँको पीसी संग अन्तरक्रिया गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - सम्पादक छोडेर स्क्रिनबाट भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्। यो धेरै सुविधाजनक छ किनभने यसले धेरै समय बचत गर्छ। उदाहरण को लागी, यो सुविधा संग, तपाइँ ट्यूटोरियल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
2. क्रिएटिभ क्लाउड वैकल्पिक: Affinity Photo
AFFINITY PHOTO नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
Adobe उत्पादनहरु भन्दा सस्तो
बहु-स्तर छवि सम्पादन
छविहरू आयात र व्यवस्थापन गर्न उपकरणहरूको अभाव
लेन्स प्रोफाइलमा निर्भर गर्दै कुनै सुधार छैन
क्लाउड भण्डारण छैन
एफिनिटी फोटोले एप्लिकेसनहरूको विस्तृत सूची प्रदान गर्दछ: एफिनिटी फोटो, एफिनिटी डिजाइनर र एफिनिटी प्रकाशक। प्रत्येक एप सार्वभौमिक छ र यसको आफ्नै फाइदाहरू छन्। यस प्लेटफर्मको एक विशिष्ट विशेषता भनेको इजाजतपत्र प्राप्त संस्करण तुरुन्तै खरिद गर्नु हो। तपाईंले हरेक महिना तिर्नु पर्दैन, जस्तै नि:शुल्क परीक्षण Adobe Creative Cloud को म्याद समाप्त भएपछि।
यदि हामी प्रभावशाली कार्यक्षमताको बारेमा कुरा गर्छौं भने, अहिलेसम्म फोटो सम्पादक अग्रणी छ। तपाईं व्यावसायिक रूपमा आफ्ना छविहरूलाई पुन: टच गर्न सक्नुहुन्छ, दृश्यहरूका लागि तस्विरहरू संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ, HDR प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका ब्रशहरूसँग कोर्न सक्नुहुन्छ। यसले उन्नत उपकरणहरू, ब्याच फोटो सम्पादन, फन्ट प्रभावहरू र लेन्स विकृति सुधार पनि समावेश गर्दछ।
प्लग-इनहरू विस्तार गर्ने क्षमता
शक्तिशाली कन्फिगरेसन आवश्यक पर्दैन
Photoshop भन्दा सस्तो
चलाउनको लागि स्थिर इन्टरनेट पहुँच चाहिन्छ
प्रदर्शन Photoshopमा जस्तो राम्रो छैन
Pixlr सम्पादकको साथ, तपाईंले Photoshop जस्तै उपकरणहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। म तीखोपन, धमिलो, आवाज, स्तर, मास्क र कर्भ सेटिङहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु, र यी ती मध्ये केही मात्र हुन्। तपाईंले अपेक्षा गर्नुभएका कला फिल्टरहरू साथै स्वत: अप्टिमाइजेसन विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। Pixlr ले ब्रश, फिल, स्ट्याम्प, चयन र उपचार उपकरणहरू समावेश गर्ने उपकरणहरूको सेट प्रदान गर्दछ। तपाईं एक पटक यो कार्यक्रम रिसोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ Photoshop परीक्षण समाप्त भयो।
कसरी प्रयोग गर्ने बारे थप हेर्नुहोस् Photoshop नि: शुल्क ।
RAWTHEPAREE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
ब्याच फोटो प्रशोधन
RawTherapee एक खुला स्रोत, क्रस-प्लेटफर्म अनुप्रयोग हो। तस्विर सम्पादन उपकरण र मल्टिथ्रेडिङको एक विस्तृत सेटको साथ, तपाइँ विकृतिहरू सच्याउन, रङहरू सुधार गर्न, तपाइँको RAW फाइलहरूमा विवरणहरू पुनर्स्थापना गर्न र थप गर्न सक्नुहुन्छ। यो उल्लेखनीय छ कि छवि सम्पादकले ब्याच फोटो प्रशोधनलाई समर्थन गर्दछ जसले यसलाई सबैभन्दा शक्तिशाली लाइटरूम विकल्पहरू मध्ये एक बनाउँछ।
कसरी प्राप्त गर्ने बारे थप हेर्नुहोस् लाइटरूम नि: शुल्क ।
इलस्ट्रेटर प्लग-इनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
उन्नत हेरफेर क्षमताहरू
फिल्टरहरूको ठूलो संख्या
पुरानो ढाँचा इन्टरफेस
Inkscape अर्को नि: शुल्क उपकरण हो जसले Adobe लाई पूर्ण रूपमा अनुकरण गर्दछ। उपकरण बाकसले उन्नत हेरफेर क्षमताहरू र फिल्टरहरूको विस्तृत दायराका साथ स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स (SVG) फाइलहरू सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्न सजिलो बनाउँदछ - कार्यात्मक र कलात्मक दुवै। चाखलाग्दो उपकरणहरू मध्ये, म ग्रिड ढाँचाहरू र पेन्सिल रेखाहरूको अन्तरक्रियात्मक स्मूथिंग, साथै रूपरेखाहरूको हास्यास्पद प्रभावहरू हाइलाइट गर्नेछु। यो उल्लेखनीय छ कि तपाईले Inkscape लाई Illustrator को लागी प्लग-इन को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
थप हेर्नुहोस् Adobe Illustrator कसरी नि: शुल्क प्राप्त ।
DAVINCI RESOLVE नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
विभिन्न प्लगइनहरूको लागि समर्थन
व्यावहारिक रूपमा सबै ढाँचाहरूको लागि समर्थन
DaVinci Resolve एक पेशेवर भिडियो सम्पादन एप हो। यो धेरै राम्रो छ कि यो लामो चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू रेकर्ड गर्दा प्रयोग गरिन्छ। रङ सुधार र अडियो पोस्ट-उत्पादनमा विशेषज्ञता, DaVinci Resolve ले प्रभावशाली सुविधाहरू, जस्तै कर्भ सम्पादकहरू र प्राथमिक रंग पाङ्ग्राहरू समेट्छ। यसले अनुहार पहिचान ट्र्याकिङलाई पनि समर्थन गर्दछ, प्रयोगकर्ताहरूलाई छालाको टोन, आँखा र ओठको रंगसँग खेल्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
थप हेर्नुहोस् Adobe Premiere Pro नि: शुल्क कसरी प्राप्त ।
7. Adobe After Effects वैकल्पिक: Blender
BLENDER नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
व्यावसायिक दृश्य प्रभावहरू सिर्जना गर्न अनुपयुक्त
After Effects को लागि केहि शीर्ष-गुणस्तर क्रस-प्लेटफर्म विकल्पहरू मध्ये एक ब्लेंडर हो। यसको मद्दतले, तपाईंले अति-यथार्थवादी एनिमेटेड ग्राफिक्स र 3D भिजुअल प्रभावहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै एमेच्योर र विशेषज्ञहरूले अतिरिक्त आयामको साथ आश्चर्यजनक कार्यहरू सिर्जना गर्न तिनीहरूको बनावट, कण मोडलिङ र कम्पोजिटिंग उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्।
थप हेर्नुहोस् Adobe After Effects कसरी नि: शुल्क प्राप्त हुन्छ ।
नि:शुल्क Adobe CC नि:शुल्क
के तपाईंले सबै Adobe Creative Cloud एपहरू खरिद गर्नुभएको छ? त्यसोभए तपाईलाई निश्चित रूपमा विभिन्न प्लग-इनहरू चाहिन्छ, चाहे यो Photoshopको लागि ब्रश हो, लाइटरूमको लागि प्रिसेट वा प्रिमियर प्रोको लागि LUTs। तपाईंले तिनीहरूलाई नि: शुल्क डाउनलोड र परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले कामलाई सरल बनाउनेछन् र पोस्ट उत्पादनमा बिताएको समय कम गर्नेछ।
Mac/Win को लागि Adobe Creative Cloud नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाइँलाई सदस्यता खरिद गर्ने बारे शङ्का छ भने, Adobe Creative Cloud नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्नुहोस्। क्रिएटिभ क्लाउडका सुविधाहरू, साथै यस सदस्यतासँग उपलब्ध सबै अनुप्रयोगहरू परीक्षण गर्ने मौका नभुल्नुहोस्।
विश्वास गर्न नसकिने तेस्रो-पक्ष स्रोतहरूबाट कार्यक्रमको संस्करणहरू डाउनलोड गर्नुको सट्टा, आधिकारिक वेबसाइटबाट Photoshop CS6 नि: शुल्क डाउनलोड गर्न राम्रो छ। यस तरिकाले तपाइँ प्रणाली विफलता र कानूनको साथ समस्याहरूबाट बच्नुहुनेछ।
नि: शुल्क रचनात्मक क्लाउड लाभहरू
नि: शुल्क रचनात्मक क्लाउड विकल्पहरू
क्रिएटिभ क्लाउड नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्